China FIBC Pee Film Auto Bottle udi liner akara tingcha Machine factory na-emepụta | VYT
Kalama n'olu n'ime akpa akpụ igwe adopts PLC usoro, na spindle moto na-chụpụrụ site na ụwa elu AC servo akara technology, nke nwere àgwà nke nnukwu torque, elu arụmọrụ, anụ ọsọ na ala mkpọtụ. Ebumnuche nke ogwe ọrụ dị iche iche, nke nwere ike izute ihe ndị ahịa dị iche iche chọrọ; usoro a nakweere ụdị nhazi nke China, nke dị mfe maka nrụnye na ndozi.
1 Pee akpa （M） obosara （mm） 1200 (Max)
2 Ne akpa ogologo (mm) 2500-3000mm
3 Cha nkenke (mm） ± 10mm
4 mmepụta ikike （pc / h） 60-120
5 njikwa okpomọkụ 0-350 ℃
6 Ike niile 36Kw
7 Voltaji 380V (50HZ) ， 3ph
8 abịakọrọ ikuku 10Kg / cm2
9 Nwụnye akụkụ （mm） 2200 * 2100 （Gụnyere kabinet eletrik 300） * 1800
10 Igwe dị arọ （n'arọ） 3000kg
11 Ngwa ndị dị LDPE, HDPE, NYLON ihe nkiri coextrusion
Iji chebe ihe dị n'ime nnukwu akpa site na ihe ọ bụla metụtara gburugburu ebe obibi maka ịkwụsị ihe ka ájá dị n'èzí nnukwu akpa, a ga-etinye liner n'ime. Ezubere igwe akụrụngwa akara karama anyị iji mepụta liner na ọrụ akara na ịchacha, dabara maka anọ loops nnukwu akpa ahụ, na-ejupụta nsị na ihapu mmiri.
Biko ejikwala ngwaọrụ a na gburugburu ebe a:
1. Ebe mgbanwe voltaji gafere exceed 10% nke ifriizi etiti voltaji.
2. Enweghi ike ijide ikike nke ike na ebe nwere ikike akọwapụtara.
3. Ime ụlọ dị n'okpuru 0 ℃ ma ọ bụ karịa 35 ℃.
4. N'èzí ma ọ bụ ebe ìhè anyanwụ ga-enwu.
5. Ebe dị n'akụkụ kpo oku (ọkụ eletrik).
6. Ebe nwere iru mmiri nwere mmetụta n'okpuru 45% ma ọ bụ karịa 85% na ebe igirigi dị.
7. Ebe na-emebi emebi ma obu ebe uzuzu.
8. Ebe na-adaba na mgbawa gas ma ọ bụ mgbawa mmanụ.
9. Ọ bụrụ na ebe ebe akwa karama akpa na-akpụ igwe na-adịkarị mfe ịma jijiji, tinye igbe njikwa na ebe ọzọ.
1. Ogwe njikwa:
Biko soro ntuziaka ịwụnye ya n'ụzọ ziri ezi. Tupu igbe ejikọrọ na njikwa ahụ, biko lelee ma ọkụ ọkụ nke ike a na-ejikọ bụ otu ihe voltaji akara na igbe nchịkwa, na enwere ike ịnye ike mgbe akwadochara ọnọdụ ahụ. Ọ bụrụ na e nwere ike transformer, otu na-elele tupu ike ọkọnọ. N'oge a, a ga-enyerịrị ụdị bọtịnụ ụdị bọtịnụ na kalama n'olu n'ime akpa na-akpụ igwe na [anya].
2. Ike ụdọ:
Biko adịghị pịa ike ụdọ na ndọda ma ọ bụ tụgharịa ya ókè. Biko etinyekwala ụdọ ike n'akụkụ akụkụ na-agbagharị, ọ dịkarịa ala 25 mm pụọ.
Iji gbochie oke ọkụ eletrik nke ụda mkpọtụ na nkwụsị eletrik na-akpata, a ga-agbanye ala waya na akara ike n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ijikọ ngwaọrụ ngwa eletriki, biko soro ọnọdụ egosiri.
4. Ichighari na nkpochapu:
Iji wepu igbe njikwa, ị ga-ebu ụzọ gbanyụọ ike ma kwụpụ plọg ike ahụ. Mgbe ị na-akpunye plọg ike ahụ, adọtaghị eriri ọkụ ahụ, ị ​​ga-ejirịrị aka jide plọg ike wee dọpụta ya. E nwere nnukwu voltaji dị na igbe njikwa, yabụ imepe mkpuchi igbe njikwa, ịkwesịrị ịgbanyụ ike wee chere ihe karịrị nkeji 5 tupu ịmepe mkpuchi igbe njikwa.
Nlekọta, nyocha na ndozi.
Ndị nrụzi a zụrụ azụ ga-arụ ọrụ nrụzi na ndozi ahụ.
Biko gbanyụọ ike mgbe ị na-agbanwe onye na-egbu ihe wee nwụọ cutter.
Biko jiri ezigbo akụkụ.
Nke gara aga: Ogologo maka FIBC nhicha igwe - Akpaaka Jumbo akpa nhicha igwe ikuku ikuku FIBC Cleaner ESP-B - VYT
Osote: FIBC Jumbo akpa nhicha igwe ESP-A
Bottle Olu Liner akara Machine
Pee Big Bag Heating akara na Machinecha Machine
Pee Big Bag Heating akara cutter Machine